Filtrer les éléments par date : dimanche, 17 juin 2018
dimanche, 17 juin 2018 23:07
Kitra-Mondial 2018: Sahirana ireo ekipa vaventy
Nandiso ny tombatomban’ny mpahay baolina kitra ny voka-dalao tamin’ity alahady 17 jona 2018 ity, satria sahirana ireo ekipa heverina fa vaventy.
Resin’i Serbia tamin’ny isa 1 noho 0 i Costa Rica. Lavon’i Mexique 1 noho 0 ihany koa i Allemagne. Tamin’ny lalao fahatelo, dia voatazon’i Soisa ady sahala 1 noho 1 ry zareo Breziliana.
Publié dans Mondial 2018
dimanche, 17 juin 2018 22:58
Marc Ravalomanana: Vonona hiatrika fifidianana na aroso alohan’ny fotoana na ahemotra
Nametraka fanontaniana anefa ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako I Madagasikara raha toa ka tena handeha amin’ny mangaraharaha tokoa io fifidianana io ?
Miahiahy ny amin’ny fahaleovantenan’ny CENI, indrindra eny anivon’ny Fokontany sy Distrika i Marc Ravalomanana, izay no nambarany fa tsy nahazoan’i Madagasikara tohana ara-bola afa-tsy 12 tapitrisa Euros, hanatanterahana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, nefa i Repoblika Demokratikan’i Congo mahazo 175 tapitrisa Euros.
Mila amboarina aloha ny rafitra ny hananan’ny CENI fahaleovantena marina, hoy i Marc Ravalomanana fa vonona hanampy ara-bola ry zareo any Bruxelles.
dimanche, 17 juin 2018 22:49
Conjoncture: Marc Ravalomanana rencontrera Ntsay Christian ce lundi 18 juin
L’ancien président de la République et président national du parti Tiako i Madagasikara l’a fait savoir à la presse ce dimanche 17 juin en fin d’après-midi après avoir reçu, à son domicile à Faravohitra-Antananarivo, des représentants de son parti qui lui ont présentés des vœux à l’occasion de la fête des pères.
dimanche, 17 juin 2018 22:37
Mahajanga: Nomarihana tamin'ny fizarana sakafo ho an'ny mpiara-belona ny famaranana ny ramadany
Godrogodro, firafira, ranom-boankazo sy ny maro hafa, ireo no anisan'ny karazan-tsakafo nozarain'ireo mpino silamo ho an'ny mponin'i Mahajanga teny amin'ny Bord de la mer omaly hariva ho fanamarihana ny fifaranan'ny fifehezana.
Nahazo anjara tamin'izany avokoa na ny mpanaraka ny fivavahana silamo na tsia, hatramin'ireo mpitsangatsangana teny an-toerana.
dimanche, 17 juin 2018 22:32
Fifanarahana politika: “Sady tsy nahita no tsy nanao sonia izany aho”, hoy i Marc Ravalomanana
Nahitsy ny tenin’ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny trano fonenany Faravohitra Antananarivo ny fiafaran’ny tolakandron’ity alahady 17 jona 2018 ity izy, fa sady tsy nahita no tsy nanao sonia izany fifanarahana politika nentina nananganana io governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian io ny tenany.
dimanche, 17 juin 2018 22:22
Oniversiten'i Mahajanga: Nahazo fanalefahan-tsazy ireo mpianatra voasazy
Nivoaka ny didy valin'ny Filankevitry ny fitsipi-pifehezana na CODIS andiany fahatelo nahavoaantso ireo mpianatra 21 mianadahy ny 6 jona 2018 teo. Niezaka ny oniversite nanalefaka ny sazy nomena ireo mpianatra voakasika tany am-boalohany mba hisian'ny fitoniana sy hivahan'ny olana izay mitarazoka eny amin'ny oniversite.
18 tamin'ireo mpianatra ireo no nandefa taratasy fifonana nialohan'ny niatrehana ny fiakarana nanoloana ny CODIS.
Ho an'ireo nahazo sazy mampiato fianarana mandritra ny herintaona hatramin'ny roa taona, dia afaka misoratra anarana avy hatrany ary manohy ny fianarana amin'ny enim-bolana faharoa. Mpianatra iray kosa no nandefa taratasy fifonana saingy tsy nanatrika ny filankevitra ka amin'ny taom-pianarana manaraka vao afaka misoratra anarana.
dimanche, 17 juin 2018 22:16
Marc Ravalomanana: “Raha ilaina dia ho avy eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey aho”
Sahiran-tsaina ny olona hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe: inona ihany ity eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey ity, nefa ny governemanta efa eo. Misy zavatra tsy mbola milamina ny fitakiana ka mila hazavaina izany. Raha ilaina ny hanazava izany dia ho avy eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey aho, hoy ity filoha nasionalin’ny antoko Tiako I Madagasikara ity.
dimanche, 17 juin 2018 22:06
Andry Rajoelina: “Avoahy ny datim-pifidianana !”
Hajao ny voalazan’ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana. Avoahy ny datim-pifidianana manaraka ny didin'ny HCC, hoy ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, nandritra ny fandaharana manokana niarahan’ny fahitalavitra tsy miankina VIVA sy TV Plus Madagascar ny alin’ny alahady 17 jona 2018.
Ho fantatra eo, hoy izy, iza avokoa ireo kandida hirotsaka hofidiana filoham-pirenena rehefa mivoaka eo ny datim-pifidianana. Tsy maintsy mametra-pialana roa volana alohan’ny latsa-bato ihany koa ny filohan’ny Repoblika amperin’asa raha hirotsaka izy.
dimanche, 17 juin 2018 19:51
Port Toamasina: Mpiasa miisa 171 notolorana mari-boninahitra
Natao ny zoma maraina teo, tao amin’ny « Foyer social canada », toeram-pilanonan’ny Port Toamasina (SPAT), ny fanolorana ny mari-boninahitra ho an’ireo mpiasa miisa 171 nahavita be teo anivon’ny seranana, isan’ireo nisitraka izany ny tale jeneraly Avellin Christian Eddy.
Nanome voninahitra ny lanonana ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro Ralava Beboarimisa, sy ny filohan’ny komitim-pitantanan’ny SPAT sady mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena Rtoa Razanadrakoto Herisoa.
dimanche, 17 juin 2018 19:44
Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana: Hanao fanambarana mandritra ny fananganan-tsaina ny Sendikan’ny mpiasa
Tapitra ny 48 ora, nanomboka tamin’ny alakamisy 14 jona 2018, nomen’ny Sendikan’ny mpiasan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana, ny Minisitra Randriarimanana Harison Edmond hanesorana amin’ny toerany ny Tale jeneraly sy ny Sekretera jeneraly ao amin’ity ministera ity.
Hisy ny fanapahan-kevitra horaisin’ny sendika, izay vao niforona tao anatin’izao krizy diavin’ny firenena izao, ary hampahafantariny mandritra ny fananganan-tsaina ny alatsinainy 18 jona 2018 amin’ny 8ora sy sasany maraina etsy Anosy-Antananarivo izany.